Raadiyaha Qorshaha Medicare - Xarunta Agabka & Naafada (ADRC)
ADRC waa ishaada lagahelo macluumaadka dhexdhexaadka ah, ee casriyaysan ee Medicare.
Khabiirada Waxtarka ADRC waxay bixin karaan:
Isbarbardhiga qorshaha Medicare Qaybta D (caymiska dawada kaliya)
Isbarbardhiga qorshaha faa'iidada ee Medicare (caymiska caafimaadka iyo daawada)
Isbarbardhiga Qorshaha Medicare waxaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo macluumaadka aad na siiso. Waxaan ku galin doonnaa macluumaadkaaga aaladda Medicare Plan Finder, oo ku taal www.medicare.gov. Fadlan soo buuxi oo soo gudbi macluumaadka caafimaadkaaga iyo daroogada waana kula soo xiriiri doonaa si aan uga wada hadalno xulashooyinka qorshaha. Khabiiradayada Faa'iidada ee tababaran ayaa kaa caawin doona sharaxaadda ikhtiyaarka Qorshaha Finder si aad awood ugu yeelatid inaad gaarto go'aanno xog -ogaal ah oo khuseeya ikhtiyaarada caymiskaaga.
Wac maanta (920) 448-4300 oo kala hadal Khabiirka Waxtarka ee ku saabsan isbarbardhiga qorshahaaga shaqsiyeed; ama, dhammeystir oo soo gudbi macluumaadkaaga caafimaadka iyo daroogada hoosta waxaanna kula soo xiriiri doonnaa si aan ugala hadalno fursadaha qorshaha.
Isbarbardhiga Qorshaha Medicare
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah markaad buuxinayso codsiga isbarbardhigga ee hoose, fadlan naga soo wac (920) 448-4300. FIIRO GAAR AH: Foomkan kuma habboona Internet Explorer (IE). Fadlan isticmaal biraawsar kale sida Mozilla, Chrome, ama Edge.
Muddada Isqorista:(Loo baahan yahay)
Diiwaangelinta Furan ee Sannadlaha ah
Waxaan kucusub nahay Medicare
Waxaan raadinayaa a:(Loo baahan yahay)
Raadinta Qorshaha Guud *
Raadinta Qorshaha Gaarka ah
*Xusuusin - Raadinta Guud waxaa la samayn karaa marka aadan lahayn koonto MyMedicare.gov ama aadan rabin inaad shaaciso macluumaadka koontadaada. Baadhitaannada Guud laguma kaydin karo aaladda Helitaanka Qorshaha Medicare ee tixraaca mustaqbalka.
Waxaan xiiseynayaa dib u eegista:
Qorshaha Qaybta D
Taariikhda Dhalashada(Loo baahan yahay)
Phone(Loo baahan yahay)
Cinwaanka(Loo baahan yahay)
dareenka(Loo baahan yahay)
County(Loo baahan yahay)
Zip Code(Loo baahan yahay)
Sideed jeclaan lahayd in natiijooyinka laguu siiyo?(Loo baahan yahay)
Isbarbardhigga Qorshaha Boostada - macluumaadka ayaa laguu soo diri doonaa
Isbarbardhigga Qorshaha Iimaylka - macluumaadka ayaa laguu soo diri doonaa emayl
Booqashada Xafiiska ee Wadahadalka Qorshaha - Shaqaalaha ADRC ayaa ku soo wici doona si aad u samaysato booqasho xafiis si aad ugala hadasho fursadaha qorshaha
Wadahadalka Qorshaha Virtual - Shaqaalaha ADRC ayaa email kuugu soo diri doona si aad u samaysato booqasho dalwadnimo ah si aad ugala hadasho fursadaha qorshaha
Ku cusub Medicare
Lambarka Medicare (ikhtiyaari)
Dhammaan macluumaadka aad soo gudbiso waxaa lagu xafidaa si ammaan ah oo qarsoodi ah.
Medicaid - BadgerCare+
Loo shaqeeye kafaala qaaday
Loo -shaqeeyaha Hawl -gabka Kafiilka ah
Taariikhda Bilowga Medicare: Qeybta A
Taariikhda Bilowga Medicare: Qeybta B
MyMedicare.gov Magaca isticmaalaha(Loo baahan yahay)
Password(Loo baahan yahay)
Bixi magaca qorshahaaga hadda:
Qor ugu yaraan 2, ilaa 5
Farmashiyaha La Doorbiday
Ku dar farmashiye kale3
Ku dar farmashiye kale
isbarbar dhigga boostada
Hubi inaad ku darto dalabka boosta marka la barbardhigo
Ku dar farmashiye kale4
Ku dar farmashiye kale5
Liis garee daawooyinka aad hada qaadato
Immisa daawo ayaad hadda qaadataa?
Ma qaato wax daawo ah oo dhakhtar ii soo qoray
Bil kastaBil kasta 2Bil kasta 3Bil kasta 6Bil kasta 12
Meel dheeraad ah haddii aad haysato in ka badan 8 daawo. Fadlan hubi inaad taxdo magac kasta, qiyaasta, tirada, iyo inta jeer.
Dhakhtarka Daryeelka Koowaad (PCP)
Bixiyeyaasha kale ee aad Isticmaasho
Isbitaalka La Doorbiday
Mid kale (ku qor sanduuqa)
Miyaad caawimo ka heshaa kharashyada mid ka mid ah barnaamijyadan?
Kabitaanka Dakhliga ee Dheeriga ah
Barnaamijka Kaydinta Medicare
Caawinaad Dheeraad ah oo ka socota Lambarka Bulshada
Kaalmo kama helo mid ka mid ah barnaamijyadan
Bayaanka Qarsoodiga Macmiilka
ADRC waxay u baahan tahay macluumaadkan si loo qiimeeyo loona go'aamiyo u -qalmitaanka barnaamijka oo loo hoggaansamo shuruudaha warbixinta. Macluumaadkan waxaa lagu kaydiyaa keyd elektaroonig ah oo sugan. Macluumaadkaaga lama wadaagi doono oggolaanshahaaga mooyaane haddii sharci ama qandaraas oggolaado mooyaane. Macluumaadkan cidna lagama iibin doono. Waxaad xaq u leedahay inaad dib u eegto diiwaanadaada oo aad codsato wax ka beddel si loo hubiyo sax ahaanshaha. Haddii aad diido inaad bixiso macluumaadkan, laguuma diidi doono adeegyada badankood. Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan weydii shaqaalaha ADRC. Wac (920) 448-4300 ama iimayl u dir bc.adrc@browncountywi.gov.
Guji gudbinta si aad u dirto:(Loo baahan yahay)
Adoo gujinaya batoonka gudbinta ee hoose, codsigan waxaa si ammaan ah emayl loogu diri doonaa kooxdeena takhasuska gaarka ah ee ADRC.
Waxaan cadeynayaa taas:
Waxaan ahay qofka codsigan codsanaya
Codsigan waxaan ku sameynayaa qof kale